24.03.2020 Coronavirus Nkọwa Zuru Ezu: Ọnụ ọgụgụ nke Ndị Ọrịa Ọrịa 26 | RayHaber | raillynews
HomeGeneralOGBU NIILEcoronavirus24.03.2020 Coronavirus Nkọwa Zuru Ezu: Ọnụ ọgụgụ ndị ọrịa Ọrịa 26
24.03.2020 Coronavirus Nkọwa Zuru Ezu: Ọnụ ọgụgụ ndị ọrịa Ọrịa 26
table-egosi ọhụrụ ọnọdụ banyere # Coronavirus ikpe ke Turkey, e na-akọrọ ndị ọha na eze.
Ọnụ ọgụgụ nke ikpe: 1.872
Nlekọta kpụ ọkụ n'ọnụ: 136
Inubated (Ndidi na-arịa ọrịa): 102
toki corona virus ndidi ndepụta
Twiti, onye kọwara nguzozi coronavirus nke ụbọchị 24.03.2020 nke Minista Ahụike Fahrettin Koca bụ dịka ndị a:
Mmadu ole? A na-ajụ nke a kwa ụbọchị na 195 mba. Weere na ọ bụrụ na akaha maka Turkey. Measurekpụrụ ahụ nwere ike igbochi mmụba ahụ. Ngụkọta nke nnwale nke 24 mere na LỌR 3.952 343 NA-AKA. Enwere ọrịa ọhụụ 7. Anyị mmadụ asaa n’ime ndị ọrịa anyị nwụrụ. Otu bụ onye ọrịa COPD. Ha dị afọ isii. Anyị siri ike dịka ihe anyị tụkwasara.
Turkey Coronavirus Balance mpempe akwụkwọ 24.03.2020/XNUMX/XNUMX
Ka ọ dị ugbu a, emeela nnwale nke 27.969, 1.872 achọpụtala, anyị enwekwaghị ndị ọrịa 44, ndị ihe ka ọtụtụ bụ ndị agadi na ndị ọrịa COPD.
11.03.2020 - Onwe 1
13.03.2020 - Onwe 5
14.03.2020 - Onwe 6
15.03.2020 - Onwe 18
16.03.2020 - Onwe 47
17.03.2020 - Ọnụọgụ 98 + 1 nwụrụ
18.03.2020 - Ọnụọgụ 191 + 2 nwụrụ
19.03.2020 - Ọnụọgụ 359 + 4 nwụrụ
20.03.2020 - Ọnụọgụ 670 + 9 nwụrụ
21.03.2020 - Ọnụọgụ 947 + 21 nwụrụ
22.03.2020 - Ọnụọgụ 1256 + 30 nwụrụ
23.03.2020 - Ọnụọgụ 1529 + 37 nwụrụ
24.03.2020 - Ọnụọgụ 1872 + 44 nwụrụ
Onye Minista Ahụike Fahrettin Koca na onye Mịnịsta na-ahụ maka agụmakwụkwọ mba Ziya Selçuk mere nkwupụta nye ndị nta akụkọ ahụ mgbe Nzukọ Kọmitii Sayensị nke sayensị. Minista Koca nyere ozi banyere ihuenyo ebe a ga-ekwuputa ọnụ ọgụgụ ikpe.
N'imesi ike na ọ nweghị ụlọ ọrụ ahụike ma ọ bụ dibịa ọ bụla nwere ike igbochi nnyefe nje a, Koca kwuru, “can nwere ike igbochi nke a. You nwere ike igbochi ya site na ịpụ n'ụlọ gị. You nwere ike igbochi ya site na iji nkpuchi ma ọ dị mkpa. Nwere ike zere ya site na ịzere ịkpọtụrụ. Steeti anyị siri ike na mgba a. Anyị bụ ndị anyị ga-enweta ike site n'ike a. ”
“Ọnụ ọgụgụ ndị toro ogo adịghị ala” ”
N'ikwu okwu banyere ndị meworo okenye, Koca kwuru, “ọnụ ọgụgụ ndị toro ogo adịghị ala. Ọrịa adịghị iche n'etiti ndị okenye, okenye na ndị agadi. Ọ bụrụ na ị nwere ọrịa ị na-amaghị, nje a ga-ekpughere ya ma ọgwụgwọ ga-esikwa ike karịa ka ị tụrụ anya. ”
“Biko ahụla ngwa dị ka ezumike”
N'icheta na agụmakwụkwọ ụmụaka na-aga n'ihu, Minista Fahrettin Koca kwuru, sị:
“Enyere ọzụzụ ahụ na ịntanetị na telivishọn nwa oge. Biko ewerela ngwa ahụ dị ka ezumike, gbochie ụmụ gị ịghọta isiokwu dị ka nke a. E kwesịghị ịhapụ ha mmụta na ndị enyi ha. ”
A ga-emelite ozi kwa oge digitally ma soro ndị ọha na-ekerịta kwa ụbọchị.
Minista Koca kesara ozi ndị a gbasara ngwa a ga-eme ka ọha na eze nata ozi dị mfe ma dokwuo anya na oge na-eso:
"N'ime oge ọzọ, anyị ga-ewelite ọnụ ọgụgụ ndị ọrịa, ọnụọgụ ule, ọnụọgụ ndị ọrịa anyị na-elekọta, ọnụ ọgụgụ ndị ọrịa ejikọtara na intubation, ngwaọrụ iku ume, na ọnụ ọgụgụ ndị ọrịa na-agwọ ọrịa, anyị ga-esoro ndị ọha na-ekerịta kwa ụbọchị."
Ọgwụ si China
N'izo aka ọnụ ọgụgụ ọgwụ ndị a takenụrụ na China na ojiji ha na ndị ọrịa, Minista Koca kwuru, “Ndị ọrịa 136 ka ebido. O were ọgwụgwọ a doro anya. Anyị maara na a na-eji ọgwụ eji eme ihe na ọkara igbe na nkwanye sitere na Kọmitii Sayensị maka onye ọrịa, ma ọ dịkarịa ala ụbọchị 5 iji. Anyị ga-enwe ike ikwu okwu nke ọma n’izu na-abịanụ ma ọ bara uru ma ọ baghị. ”
“Nde 83 adịghị anwale ule”
Koca mekwara nkọwa banyere onye kwesịrị ime ule ndị ahụ wee sị, "nde mmadụ 83 adịghị mkpa ịnwale ule, enweghị ngwa dị otú ahụ n'ụwa. Maka na mgbe inwere ule ahụ, o nwere ike bụrụ nke na-adịghị mma, mana ọ nwere ike ịba uru mgbe ụbọchị atọ na ụbọchị ise gachara. Nwere ike bute ọtụtụ mmadụ n’oge ahụ. Onye ọ bụla kwesịrị ime dị ka onye na-ebu nje a, "o kwuru.
Isi okwu sitere na nkwupụta nke Minister Selçuk bụ ndị a:
Minista Ziya Selçuk kwuru na site na aro nke Kọmitii Sayensị, ha kpebiri na ha ga-ezumike ruo mgbe Eprel 30 ga-eme ka ha nwee agụmakwụkwọ dị anya n'etiti usoro coronavirus.
N'ịchọpụta na usoro ahụ bụ nsogbu ezutere na nke mbụ n'akụkọ ihe mere eme nke ụwa, Selçuk kwusiri ike na ha na-eleba anya n'okwu a dị ka Ngalaba na-ahụ maka ọhụụ na na ihe kacha mkpa bụ ahụike ụmụaka.
"Anyị dị njikere maka ụdị ọnọdụ niile gbasara ụgwọ a na-akwụ agụmakwụkwọ na ule."
N'ịkọwapụta na ha ga-eji akwụkwọ dị elu dị elu na mmemme zuru oke na-amalite akwụkwọ ha, Selçuk kwuru:
Achọrọ m ka ụmụ amaala anyị niile na ndị mụrụ anyị na-enwe ọersụ. Anyị dị njikere maka ụdị akụkọ niile gbasara mmezu na mmezu nke agụmakwụkwọ ụmụ gị. Onweghi onye kwesiri iche na anyi ga eme ihe odi nkpa.
Minista Selçuk kwuru na site n'oge ruo n'oge, ọ ga-agwa ọha na eze ma kesaa ụfọdụ nsogbu gbasara iwu ndị ọzọ, mkpa na ule ndị metụtara Ozi nke Mmụta Mba.
22.03.2020/30/XNUMX Turkey Coronavirus Report: Total Number nke nwụrụ anwụ ọrịa bụ a XNUMX!
Ọnọdụ kachasị ọhụrụ na Trabzon Light Rail System Project, ebe a bụ ụzọ zuru ezu
Akụkọ banyere Coronavirus 24.03.2020: Anyị Etufuru 7 Ndị Ọrịa
25.03.2020 Akụkọ Coronavirus: Anyị Echefuru 59 Ọrịa
28.03.2020 Akụkọ Coronavirus: Anyị Echefuru 92 Ọrịa
29.03.2020 Akụkọ Coronavirus: Anyị Echefuru 131 Ọrịa
Ụlọ ọgwụ malitere ịrịa ọrịa
Yellow Angels Na-anapụta Ndị Ọrịa Na-enweghị Snow, Winter
Ndị na-agbanye ụgbọelu na-arụ ọrụ n'ụdị ụgbọ ala ndị dị na BursaRay mere ka ndị njem na-arịa ọrịa
Onye na-akwọ ụgbọ okporo ígwè na-ahapụ onye njem na-arịa ọrịa n'okporo ụzọ
A ga-ebipụta Ndepụta Ọrịa Coronavirus na Ntaneti!